Ngaba i-APA Association Yonke Yifanele Ukuba Yimidlalo Yethu?
Iqela le-APA lebhokisi limele iqela elinamandla kunye elinamandla, abantu banethuba elikhulu kwiibhilidi. Kodwa ngaba kukho ibali?
Njengoko i-American Poolplayers Association (APA) ithi, "I-APA Pool League yiyona nto inkulu kunazo zonke emhlabeni jikelele." Abadlali abangaphezu kwesigidi-million baphendulela echibini kwelinye okanye ngaphezulu kwama-APA angama-250 e-United States ngeveki.
I-APA inika umdlalo wokuzonwabisa kunye nentlalo yolwabelwano, imigaqo efanelekileyo yemidlalo kunye nendlela yokukhubazeka elula. Kodwa kukho into elula ukuba imicimbi ebalulekileyo inxulumano kufuneka idibanise le ngcamango yolu khokelo:
Abadlali be-APA bahlawula i-US $ 11 yezigidi rhoqo ngonyaka ukuze badlale kwiilague, kungekhona ubuninzi babo babuyela kubadlali njengemivuzo yokhuphiswano okanye ngezinye iindlela. Uphi na imali eyabelwe? Iqhezu elincinane yaloo mali linika umdla othakazelisayo eLas Vegas, i-APA Nationals.
Zonke iindawo zaseVasgas zikhanga ngamacandelo, abanye babo bathembekileyo kwaye abanye babo batyelela ukuba bangene. Yonke imali iya kwenye indawo - ininzi enkulu yeedola.
Ukungabi Nokwaneliseka kwabaThengi
Igosa le-APA elisemthethweni liyaziqhenya ngelithi iqumrhu linandipha ngaphezu kwamalungu angama-260,000 langoku, kwaye longezelela ukuba ukususela ngowe-1979 banamalungu angaphezu kwe-1,000,000 adlalayo.
Oku kuthetha ukuba abadlali abangaba ngu-750,000 baye bayeka i-APA. Uninzi lwashiya ekupheleni kwee-1980, xa i-APA ikhule ngokukhawuleza ngokukhululekisa ukuthelekisa ne- BCA neVNEA .
Enye yezinto eziphambili yimiqathango ye-APA yebhilidi yeligi. Iqula lokungena libi kakhulu. Kunzima ukuzicingela ngakumbi kunokuba xa umchasi wakho ejolise ekhoneni elingundoqo, ulahleka, kodwa uyawunqoba xa ibhola yabo iqhubela kwi-pocket side.
Ezinye iilwimi ziya kuphinda zibone ibhola ephosakeleyo, kodwa kungekhona i-APA. Omnye unako ukukhawuleza ukukhawula kwiibhola ngokukhawuleza, kunye nethemba elifanelekileyo.
Akukhona nje ukuphulwa kwe-APA
Iqela le-APA lebhubhiso linikezela ukhuphiswano oluhle kunye nokuzonwabisa kubabathathi-nxaxheba. Zonke iikomiti ezincintisana namaqela e-APA lonke ithemba lokuqhubela phambili kwiiMidlalo zeKomiti zoLuntu zonyaka kunye mhlawumbi ukuya eLas Vegas kwi-Championships ye-APA yeSizwe nganye. Akukho nto efana ne-vegas emoyeni yamawaka okhuphisana nabanomdla ngokukhawuleza, nje ubuze nawuphi na umdlali weqela okanye umphathi weqela oye waya kuyo.
Hayi, ingxaki yonke imidlalo yethu ayinamandla obusayo kwaye anamandla, kunye nokufakwa kweendaba ezilungileyo kunye nomfanekiso womntu. Kukho abantu abaninzi abazinikezele ukukhuthaza umdlalo, nje kuphela umzamo wecandelo elaneleyo.
Kwaye nakwezemidlalo ethile, njenge-pool kunye neebhilididi, oko kukuntula okubuhlungu.
AmaRekhodi e-World-Meter ye-800
Ukuchongwa koBuchule beSithuthuthu
Iimpawu kunye neenkcukacha malunga nomkhomo weNgonyama, i-Panthera Leo Spelaea
Amazwi agcinwe kwiJava
Intetho yeNigiyaka ngesiJapan